Luchie Mendoza Allen: benefits of lemon peel
benefits of lemon peel Lemon izithelo uhlukile ezisawolintshi izithelo . Nakuba ezakhini owodwa , kodwa ulamula ngokuvamile abanobungane xaxa kubantu abane izilonda nobuhlungu isisu yokugula .
Lemon Ngaphezu bunjwa okusaqanda , isikhumba obukhulu futhi kungaba ngokuvamile kube babambeke apitshikile noma kuxutshwe ngendlela izicucu isiphuzo ifomu . Lemon inikeza ezihlukahlukene izakhi ezidingekayo ngu umzimba , okuyinto ikakhulukazi vitamin C
Sizobona ukuthi izinzuzo the heck Ase uma udla i- lemon njengendlela imenyu sokudla ekuseni :
Ukwandisa somzimba sokuzivikela somzimba
Wacaphuna learni.st , kuthiwa lemon kungaba ngcono umsebenzi mzimba zomzimba . Are Antioxidants ukuthi badlala indima enkulu kulokhu . He kungasiza ukwehlisa ingozi zokuphefumula pheshana izifo , kuyasiza ukuphulukisa ukuvuvukala , kanye elwa namagciwane .
Lapho unezinkinga ukuphefumula ke lemon olufanelekayo kunazo adliwe ukuze uthole kahle .
Ukunikeza uhlobo ane-alikhali emzimbeni
Nakuba lemon kuyinto omuncu , kodwa impahla ane-alikhali ukuze akanandaba nokuthi isisu acid liyaphuma .
Lemon empeleni kungasisiza aphathe isikhuxungu . Ngokuvamile ayekholelwa , umkhuba kalamula ukwelapha izinkinga kwesibindi , izifo esiswini , izilonda , kanye nezinye izinkinga wokugaya ukudla .
Okuqukethwe vitamin C kungasiza ukuvimbela izifo ezibangwa amagciwane olubizwa Helicobacter pylon .
Antioxidants in lemon bayakwazi zokunqoba the free radicals okubangelwa ubuthi ukungcola kanye ukuchayeka UV imisebe yama A no B. Ibuye kuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi , ngokunciphisa nyokoloza imigqa ebusweni .
Isetshenziswa isikhumba , le lemon angakwazi kukhanye ubuso fade amnyama ebusweni .
Wayefundelwa egula futhi wafuna ngokushesha alulame ke kufanele ukwenze is badle lokhu lemon . Usizo lwethu lokudla okunempilo ukuphuthumisa isilonda ephulukisa kokubili ngaphandle ngaphakathi . Ukuvimbela ukushisa , kusiza ukumuncwa kangcono izakhi , kusiza ukuvimbela ukucindezeleka futhi amanxeba ngokushesha .
Nakuba njalo ezimakethe yendabuko , ungakwazi ukuthenga it esitolo noma esitolo izithelo . Amanani avame ukuba esikhundleni eqolo , kodwa uma kunezinzuzo eziningi Yiqiniso , asikho ukulahlekelwa uyithenga.